Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: ‘Hanqina qabinsa mirgaa hidhamtootarra gahu hordofaan jira’ – Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAjjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: ‘Hanqina qabinsa mirgaa hidhamtootarra gahu hordofaan jira’ – Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa
Artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu isaa booda rakkoo nageenyaa dhalateen walqabatee namootni 200 ol ta’an ajjeefamanii, qabeenyarrattis miidhaan qaqqabeera.
(bbcafaanoromoo)–Kanuma wajjin walqabatees namootni hokkora kana keessaa harka qabaachuu malu jedhaman 7,000 ol to’annoo jala ooluufi kanneen ammallee barbaadamaa jiran jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa BBC’tti himeera.
Kanneen to’annoo poolisii jala jiran obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantootni dhaaba mormituu, gaazexessitootni, miseensotni dhaaba siyaasaafi aanga’ootni mootummaallee ni argamu.
Guyyaa Kamisaa mana murtiitti dhiyaatanii kan turan obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammadifi kaanis mana ifti gahaan hin jirre keessatti hidhamuu fi maatiifi abukaatoo waliin haasa’ufi rakkachuuf kaaniis komatanii Manni murtii kun akka fooyya’u ajajeera.
Obbo Iskindir Naggaas guyyaa to’annoo jala oole Poolisiin reebamee akka ture komateera. Jimaata mana murtiitti kan dhiyaate hojjetaan OMN dargaggoo Shamshaddiin Xahaaas akkasuma guyyaa to’annoo jala oolu qaamolee nageenyaa mootummaan reebichi irratti raawwatamuu komateera.
Hidhaa namoota kumootaan lakkaawamanii kana wajjin walqabatee sarbama mirgaa mudachuu danda’uu fi komii hidhamtootni qabiinsa mirgaarratti qaban irratti Komishinara Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Daani’eel Baqqalaa dubbifnee dhimma qabinsa hidhamtootaa to’achaa jirraa jedhan.
‘‘Hidhamtonni hedduun reebamaniiru, midhaan irra ga’eera odeeffannoon jedhu hedduun nanna’aa tureera. Obbo Jawar Mohammad, Baqqalaa Garbaafi iskindir Naggaa dabalatee mana hidhaa poolisii Finfinnee keessa kan jiran namoota 35 ta’u,’’ jedhan.
Hunda isaanii jechuun ni danda’ama si’a lama deemne hasofsiisneerra. Hojjataa OMN kan ta’an Obbo Shamshaddiin Xahaafi Obbo Iskindir Naggaan alatti hidhamtoonni hundi yeroo to’annoo jala oolanittis ta’e mana hidhaatti reebichis ta’e dararaan gosa kamiyyuu akka irra hin geenye ifatti nuu mirkaneessaniiru jedhan Dr. Daani’eel.
‘‘Obbo Shamshaddiiniifi Iskindir akka nutti himanitti yeroo to’annoo jala oolaniitti poolisootaan reebichi irra ga’eera. Kana irratti immoo poolisiin qorannoo gaggeesse akka tarkaanfii barbaachisaa fudhatuuf gorsineerra, hordofaas jirra.’’
Hidhamtoonni tokko tokko komii isaan dhiyeessan koronaavaayirasiin walqabatee maatii waliin wal arguufi nyaata ykn uffataa irrraa fudhachuun dhorkamuu isa irratti kan jedhan Komishinarichi, Kun immoo akka foyya’uuf aanga’oota mana hidhaa waliin haasofnee jirra jedhan.
Hidhamtoonni tokko tokko maatii isaanii waliin dafanii wal arguu dhabuufi maatiin eessatti akka hidhaman baruu dadhabuun rakkoo biraa komii kaasaa jiru akka ta’e hubachuu isaaniis ibsaniiru
‘‘Keessumaa maatiileen angaa’ota ABOfi KFO kana himu.’’
‘‘Kun wanta hatattamaan furamuu qabu waan ta’eef hordofaa jirra’’ jedhanii gama kaaniin hidhamtoonni tokko tokko akka heeraatti sa’aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaanii hubachuullee BBC’tti dubbatan Dr. Dani’eel.
Kunis wanta hordoffii barbaachisudha jedhaniiru.
Finfinneen alatti naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti hidhaa gaggeeffamaa jiru irratti waan jiru komii ka’uu isa gaafatamaniifis ‘‘ammatti haala hidhamtoota Finfinnee keessa jiranii malee kan hidhamtoota hundumaa hordofnee bira hin geenye,” jechuun himan.
‘‘Fakkeenyaaf Finfinneen alatti Oromiyaa magaaloota akka Buraayyuu, Ciroo, Arsi Nageelleefi Dheeraa keessatti lakkoofsii hidhamtoota heddumminaan dabalaa jiraachuu odeeffannoon nu ga’eera isa ammoo hordofuuf qophaa’aa jirra.’’
Hidhamtoonni maatii keenyarra dorsiisi ga’aa jira jechuun kanneen BBC’n abukaatoo isaanii dubbise komataniiru.
‘‘Kanarratti odeeffannoo hin qabu. Hin geenye jechuu hin danda’u garu nu bira komiin akkanaa ammaaf hin geenye. Kun uumameera taanaan dogoggora waan ta’eef nuti hordofnee tarkaanfii barbaachisaa ta’e fudhachuu qabna,” jedhan.
Manneen midiyaa tokko tokkofi hojjjattoota miidiyaa sanaa irratti mootummaan yakka hojjataniiru kan jedhuun tarkaanfii fudhateera.
Kanarratti kan dubbatan Komishinar Daani’eel, ‘‘Kun qorannoorra waan jiruuf bu’aa qorannoo kanaa eeguu qabna. Dhugaa dubbachuuf hokkora uumame keessatti miidiyaan ga’ee tokko hin qabu jechuu hin dandeenyu,” jedhan.
‘‘Ta’us garuu miidiyaa kamtu ga’ee kam qaba isa jedhu irratti yaadni adda addaa jira.
Adeemsa qorannoo keessa kallattiin hirmaachuu baannuus namoota himataman kanaaf firdii qajeelaa kennamuufi adeemsi isaa mirga namummaa isaanii kan hin sarbine ta’uu isaa irratti hordoffiiifi taajjabbii keenya itti fufna,’’ jedhan Komishinar Daani’el.
Thank you BBC Afaan Oromo and you guys for watching , liking and sharing my tribute of Hachallu Hundessa. Most of us in diaspora and back home were not able to properly grieve for him and the pain is still fresh but at least we can vent using our art and social Media.
Qeerros after Haacaaluu Hundeessaa’s song at Irrecha2017